Chihuahua Terrier Mix - Ihe Dika Inwe Otu - Reeddịrị
Chihuahua Terrier Mix - Ihe Dika Inwe Otu
Dị ka aha ahụ na-egosi, ngwakọta Chihuahua Terrier bụ naanị nke ahụ.
Nke a feisty, na-enwu gbaa ma na energetic pooch bụ n'ihi nke mating a Chihuahua ya na ndi nke Terrier. Ihe omuma atu kariri:
Nwere mmasị ịmara ihe na-eme mgbe anyị jikọtara Chihuahua dị egwu mana ụdị egwu egwu na-adịghị agwụ ike? Guo ka ị hụ ma nkịta a dị ntakịrị, mana, nwere ike ịbụ maka gị.
Chihuahua Terrier Mix Info Isiokwu
Nha 10 ruo 28 ″
Ibu ibu 6 ka 25 n'arọ
Afọ ndụ 12 - 20 afọ
Agba dị iche iche White, nwa, tan, aja aja, bi na atọ agba n'ihi na nso ke Terrier udiri anumanu
Iwe Ike, ike ọgwụgwụ, nọ n'ọrụ, isi ike, feisty na-enwu gbaa
Chihuahua Terrier Mix - Ozo Nnoo
Chihuahua Terrier Mix Person
Etu esi echekwa ihe eji eme ihe
Nri a Chihuahua Mix Nkịta - Nri chọrọ
Na-emega Nkita Nkita
Zụ Terrier Chihuahua Mix
Chihuahua Terrier Mix Ọdịdị
Nchịkọta nke ụdị
Naanị ihe ọ na-ekwu na tin, ngwakọta Chihuahua Terrier nwere ike bụrụ nkịta dị iche iche.
Sassy pooch a sitere na ozuzu oke nke Chihuahua nwere otu n'ime ọtụtụ egwu. Dị ka ị nwere ike ịma, enwere ọtụtụ ụdị egwu dị iche iche edenyere aha na American kennel Club. A hụrụ ha n'anya maka ịdị ike na ịdị ike.
Ndị a na-ejikarị emepụta ụdị a bụ:
Yorkshire Onye ikpe ( a makwaara dị ka Chorkie )
A na-asọpụrụ Rat Terriers maka ọgụgụ isi ha - ọ bụghị ụdị ochie ahụ, ha pụtara na mbụ na States gburugburu 1920’s-1930s. Nnukwu ibu karịa Terrier ndị ọzọ, mgbe a gafere Chihuahua na Terrier a, ha na-adịkarị na nnukwu nha nke ọnụ ọgụgụ (yabụ nso 20 pound).
Na Jack Russell Terrier a na-asọpụrụ maka mkpebi ya. Ha na-atụ ụjọ, na-eme egwuregwu ma na-eme nke ọma n'ụlọ na-arụ ọrụ ma na-elekarị anya na egwuregwu ma ọ bụ egwuregwu bọọlụ.
Fox Terriers nwere ike ịbụ ezigbo, ma ọ bụ waya na-ete; yiri na ọnọdụ, ọ bụ naanị ọdịdị ha dị iche. Akọwapụtara dị ka onye nweere onwe ya, nke a bụ ụzọ dị mma isi kwuo na ha ga-emechu gị ihu oge ụfọdụ. Dị ike, ụmụ okorobịa a chọkwara ụlọ na-arụ ọrụ.
Anyị maara na ọtụtụ ndị ụjọ ji ụdị ọrụ ahụ; nọ n'ọrụ, mụrụ anya, nwee ọgụgụ isi na onwe ya. Kedu ihe ga - eme mgbe anyị gwakọtara otu n’ime Terriers a na Chihuahua?
The Chihuahua bụ maa mma na amara; sitere na Mexico, ha abụrụla nkịta na-ewu ewu maka ndị ọgaranya ma bụrụ ndị ama ama ojiji ha na udiri anumanu . A hụrụ ha n'anya maka obere ha; na-edozi obere ụlọ na obibi obodo. Chis nọ na nche, dị ndụ ma feisty, mgbe ụfọdụ isi ike na onwe ha dị ka ụfọdụ ndị egwu.
Ihe anyị mechara mechara bụ nsogbu ugboro abụọ - ọgụgụ isi na ume sitere na ụjọ na ike ọchịchị si Chi.
Dika ngwakọ a bụ nkịta ngwakọ, ndị American Kennel Club amatabeghị ya, mana ụfọdụ ngwakọta, dịka Chihuahua cross Yorkshire Terrier bụ ndị International Designer Canine Registry na-amata.
Maka Chihuahua Terrier Mix Puppy, ọnụahịa dị n'etiti $ 400 - $ 800 USD.
Ọnụ ego dị elu nwere ike jikọtara ya na nne ịbụ Chihuahua ka ha nwere ike na-enwe nsogbu ahụike karịa n'oge ọrụ . Litters dịkarịsịrị obere ka ị wee chọta ọtụtụ ndị na - eme ihe ama ama na - arụ ọrụ echere.
N'agbanyeghị ọtụtụ ọdụ egwu ndị a na-agwakọta iji mepụta nche a na ọgụgụ isi ha, ọnọdụ ha na-adịkarị ka ya. Dị ka anyị si mara, anyị enweghị ike ịbụ 100% na nsonaazụ nke ngwakọ - ha nwere ike ịbụ karịa Chihuahua karịa Terrier ma ọ bụ ọzọ.
N'izugbe, ngwakọta a bụ ike dị elu na nkịta egwuregwu. Ha na-enwekarị ọgụgụ isi ma na-amụ anya, mana ọ bụrụ na ha ejigide isi ike ahụ sitere na Chihuahua, ha nwere ike ịbụ ihe ịma aka ịzụ ọzụzụ - imebi ụlọ ọkachasị.
Chihuahua Terrier Mix dabara na ndị nọ n'ọrụ, naanị ndị okenye. N'ihi ntakịrị obere ha, ha anaghị anabata egwuregwu siri ike sitere n'aka ụmụaka, yana mkpụrụ ndụ ihe nketa ịchụ nta Terrier, ha nwere ike nip .
Ha na-adabara ndị nwe nwere oge na ndidi iji mee ihe mbido na ịga n'ihu na mmekọrịta mmadụ na ọzụzụ iji hụ na ha anaghị azụlite obere nkịta ọrịa ”!
Ọtụtụ mgbe, obere nkịta ọrịa abụghị kpọmkwem ụdị kpọmkwem, ọ bụ naanị ụfọdụ ndị nwe ha na-eche na ọ dịghị ha mkpa ịzụ obere nkịta dị ka ha ga-azụ nkịta buru ibu.
Ọ bụrụ na obere nkịta na-agbọ ụja na ihe wee na-atụ ụjọ; ị nwere ike ịhọrọ ịhọrọ nkịta iji wepu ha n'ọnọdụ ahụ. Nweghị ike ime nke a na nnukwu nkịta, ị ga-adọpụ uche ma gbaa omume dị iche iche ume ma ọ bụ jikọta ya na ụgwọ ọrụ.
Obere nkịta na-amụta ịwụ elu na onye nwe ya ka eburu ya na nzaghachi egwu, ebe nnukwu nkịta na-amụta ịlaghachi nke bụ usoro nnabata ka mma.
The Terrier Chihuahua Mix, mgbe akpakọrịta nke ọma nwere ike ịnagide nkịta ndị ọzọ, mana, anaghị adị nro karịa ọtụtụ - ha na-ahọrọ ụlọ ọrụ mmadụ.
A na-akọwakarị Chihuahuas dị ka nkịta ezinụlọ - ebe ha nwere ike ịnagide nkịta ọzọ nke otu ụdị ahụ ma ọ bụ otu.
N'ihi ịchụ nta nke Terrier, ịkpachapụ anya na mmekọrịta dị mkpa ma ọ bụrụ na ị na-atụ anya ka ha na nkịta ndị ọzọ ma ọ bụ anụ ụlọ ndị ọzọ biri.
Ka anyị hụ ihe otu ụbọchị na ndụ nke ilekọta nkịta a dị ka.
Dịka anyị kwurula, nkịta a kachasị mma maka ndị nọ n'ọrụ, ndị okenye naanị ụlọ. Ha choro ndi nwere ndi nwere uche ghota ihe choro.
Kalori Ogbe 600
N'ịbụ ndị pere mpe, kalori ha na-eri kwa ụbọchị dịkwa obere. Nke a na-eme udia a mix nnọọ mfe .
Ná nkezi, ha ga-eri ihe dị ka calorie 40 kwa paụnd nke ịdị arọ ahụ kwa ụbọchị. Mgbalị Chihuahua na-atụkarị na oyi, yabụ ọ bụrụ na nkịta gị ejigidela nne na nna ha Chihuahua ị nwere ike ịchọpụta na ha na-ejikwu calorie na ihu igwe oyi, na-anwa ịnwe ọkụ.
Ngwakọta ngwakọta a na-ahụkarị ga-adị ihe dịka kilogram iri na ise n’arọ nke ga-edozi nri ha kwa ụbọchị na kalori 600.
Ezigbo nri dị mma kwesịrị ịgbakwunye nri ha chọrọ kwa ụbọchị gụnyere protein na abụba zuru oke.
Protein dị oké mkpa maka mmepe nke nwa nkita gị, chọọ a kibble ndepụta, ma ọ bụ nri ndepụta , na oke pasent nke usoro protein. Riergbọ mmiri gị nke na-adịghị agwụ ike ga-eji nke ahụ mee ihe.
Obere udiri anumanu na - ebutekarita ibu di mfe - dika ha na - eri nri okpokoro. Nyochaa nkịta gị kwa ụbọchị ma ọ bụrụ na ị na-echegbu onwe ya maka ibu ya.
N'ịbụ onye na-esiri ike ịzụ (n'ihi isi ike Chihuahua), enwere ike ịnwa gị ọnwụnwa iji ọgwụgwọ ndị ọzọ iji kwado omume ị chọrọ - tụlee iji obere kalori na-emeso ya kama.
Ga-ahụrịrị eriri ya na ọgịrịga ya. Si ele anya nnụnụ kwesịrị ịnwe akara elekere elekere na ahụ ya.
Ọ bụghị naanị na nri oriri na-emetụta ibu, yabụ ọrụ nkịta gị.
Nkeji N'ime 60
Idebe mkpụrụ ndụ nke Terrier, ngwakọta Chihuahua Terrier na-abụkarị ihe na-arụ ọrụ ma na-agwụ ike.
Nkịta a ga-achọ ihe mgbatị ahụ maka minit 60 kwa ụbọchị.
Ọ bụrụ na i chere na obere pọch a nwere ike ịbụ akwa ndina, ị gaghị enwe ike isi na eziokwu ahụ. Ọ bụrụ na ị na-achọ ndina ndina nwalee nwa nwanne nna ya .
Ha hụrụ ọrụ n'aka na, n'agbanyeghị obere nha ha, ha nwere ike ịnabata ogologo ije dị mfe na n'enweghị nsogbu. Ọ kachasị mma ijegharị na nkedo n'agbanyeghị - Terrier n'ime ha nwere ike kpebie ịchụ.
N'agbanyeghị ọgụgụ isi ha, ịchụ ahụ na-atọ gị ụtọ karịa (ọ na-abụkarị)!
Naturedị nkịta ha na-enweghị mmekọrịta-nke-kachasị-nwere ike ịpụta ogige nkịta na-esiri ike ịnyagharịa, ha nwere ike ịdị nro na nkịta ndị ọzọ, ma ọ bụ ọbụna nip. Zọ kachasị mma iji mee nke a bụ na-akpakọrịta ha site na nwata ma nyere ha aka ịme mkpakọrịta na nkịta ndị ọzọ nwere ike ịtọ ụtọ ịnọnyere.
Ọ bụghị naanị na ahụ ha na-amasị ọrụ, otu ahụ ka uche ha si adị.
Dịka anyị kwurula, obere nkịta a nwere ọgụgụ isi.
Okwu a bụ ma ọ bụrụ na ha ejidela isi ike nne na nna Chihuahua - nke a nwere ike ime ka ọzụzụ sie ike.
Ndidi bu isi ihe.
Nkịta niile na-aza ihe kacha mma na nkwado na ụgwọ ọrụ dabeere na ụgwọ ọrụ .
Bido soro ndị na-eto eto na-emekọrịta ihe, gosi ha ndị mmadụ, anụmanụ, igwe, akụrụngwa - ihe ọ bụla ha ga-ahụ n'otu ụbọchị. Cheta na anyi kwuru banyere ufodu na-etolite “obere oria nkita”, zuo obere ulo gi dika i gha azacha otutu. Omume ọ bụla ị gaghị atụ anya n'aka nnukwu nkịta; na-awụlikwa elu, na-agba ume, ịfụ ụfụ ma ọ bụ ịpị aka; anabatala obere nkịta gị.
-Gbaji ụlọ nwere ike ịbụ nsogbu na Chihuahua nke mere na nke a nwere ike bụrụ nsogbu nwere ike ịbụ maka Mix gị, nke a bụ ndụmọdụ ọzụzụ kachasị elu anyị:
Debe nwa nkita gi na usoro nri gi mgbe nile ma hapụ ya ka ọ gaa 'ite' mgbe nri ọ bụla gasịrị
Kpọrọ ya pụọ ​​ihe mbụ n'ụtụtụ na nke ikpeazụ tupu ị lakpuo ụra
Banye n'ime oge ịhapụ ya n'oge ọ bụla (nke a nwere ike ịbụ oge nkeji 30 ma ọ bụ oge elekere 1 ka ọ na-eme agadi)
Otuto / ugwo mgbe nwa nkita na-arahụ 'ite' obughi n'oge, obi uto na mberede nwere ike imeghari ya ma gbochie ya n'etiti
Were nwa nkita na otu ebe. Ọ ga-eburu isi ya
Ekpela ahụhụ maka ihe ọghọm ọ bụla n'ụlọ - ịchọrọ ka ọ gaa ite, naanị ebe kwesịrị ekwesị. Ọ bụ ọrụ gị igosi ya ebe ezigbo ebe dị
Neutralize ọ bụla ihe mberede na ụlọ na-acha ọcha mmanya iji tufuo senti
Enwere ụfọdụ nsogbu ahụike dị na ngwakọ a, gụnyere:
Luxating Patella bụ ihe a na-ahụkarị na obere ụdị. Nke a bụ ebe ikpere ikpere ha na-esi na ọnọdụ ya.
Hydrocephalus, makwaara dị ka mmiri dị na ụbụrụ , bụ ihe a na-ahụkarị na obere, ụdị egwuregwu ụmụaka. Nke a na - ebute nrụgide dị n’okpokoro isi, na - akpata ụbụrụ, ọ na - egbukarịkwa mmadụ.
Ọrịa Obi - nke a nwere ike ketara eketa ma na - egbochi ikike obi ịmịnye ọbara gburugburu ahụ. E nwere ọtụtụ mgbaàmà gụnyere ịda mbà, ike ọgwụgwụ, ụkwara ma ọ bụ nsogbu iku ume.
N'ihi ọtụtụ Terror dị na ngwakọta a, ọdịdị ha nwere ike ịdị iche iche.
A na-ahụ ha n'ọtụtụ agba gụnyere:
Bi na Tri agba
Na mgbakwunye na mgbanwe agba, ha nwere ike ịbụ ogologo ma ọ bụ mkpụmkpụ, dabere na nne na nna ha Chihuahua na Terrier. Fọdụ na-eji ire ụtọ akpọrọ, ụfọdụ na-ekpuchi waya (dịka Rat Terrier Chihuahua Mix).
Lee ndị nne na nna anya ka ị mata nke ọma ụdị ngwakọta gị ga-adị. Ndi nne na nna nne isi ma obu isi apple Chihuahua? Ogologo ma ọ bụ mkpụmkpụ ekpuchi? Terrier ahụ ọ bụ Fox Terrier? Ha dị larịị ma ọ bụ wayata ntekwasa? Nne ma ọ bụ nna Yorkshire Terrier nwere ike inye nwa Chihuahua Terrier Mix. Otu nne na nna Jack Russell nwere ike inye agba ọcha.
Ihe ha chọrọ iji ejiji ga-adabere n'ụdị uwe elu ha.
Ke ofụri ofụri, ọtụtụ mkpuchi choro ichapu 2-3 ugboro n'izu . Soro onye na-edozi nwanyị ruru eru kwurịta okwu iji nweta nghọta nke uwe akwa gị na otu esi edozi ya.
N'ihi ntakịrị ha, ị nwere ike ịchọpụta na ọ dị mfe ịsa ha n'ụlọ iji mee ka uwe ha na-esi isi ụtọ. Uwe mkpuchi mmiri nwere ike ịbụ mmanu mmanu ma yie ihe ruru unyi.
Tinyere ịmịcha anya mgbe niile, ha ga-achọ ka ntị ha na anya ha na ezé ezé kwa izu.
Ihe ụtọ Chihuahua Terrier na-atọ ụtọ ma sassy - ọ bụghị iko tii onye ọ bụla, mana maka ndị tozuru etozu nọ na-achọ ntakịrị agwa a nwere ike ịbụ ọgụ.
Mmekọrịta oge mbụ na ọzụzụ dị mkpa iji belata ohere ọ nwere ịrịa ọrịa obere nkịta.
Ọ chọrọ onye nwe ụlọ nke na-aghọta àgwà ya ma nwee ndidi iji zụọ isi ike ya.
Traininggwọ ọrụ dabeere na ụgwọ ọrụ na mmesi obi ike na-enye gị ihe kachasị mma ebe a n'ihi nke a, ị ga-enwe nkịta na-enweghị atụ na feisty; na-eguzosi ike n'ihe site n'obi ya dum.
Ọstrelia onye ọzụzụ atụrụ husky lab mix
mmewere nke nkịta ụkwụ
kedu ihe a na -akpọ ngwakọta shih tzu poodle